Izay mena valala, ny fotsy tsy te hahalala - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Izay mena valala, ny fotsy tsy te hahalala
Ratalata Jn Ba il y a 10 mois
Nangoro mena ny teny Tanjombato toerana niaingana ny 6 febroary hatreny Imerinkasinina teorana nitsangatsanganana. Nangorom-potsy kosa teny Antaninarenina fotoam-pahatsiarovana ny 7 febroary 2009. Dia eo isika izany no raisina.
Malaza izay fomba fiteny izany “Izay mena valala, izay tiana malala”. Asa aloha izay tena tian’y namoaka io ohabolana nalaza noho ny fandraisan’i Mahaleo azy tao anatin’ny tono-kirany amin’ilay hira manao mitondra ny lohateny hoe “Tanalahy ny foko”.
Nangoro-mena ny teny Tanjombato ny asabotsy 6 febroary tapany maraina teo. Vonona ny olona handeha hitsangatsangana, olona resy lava hoy ny mpandrabiraby tao amin’ny tamban-zotra fesiboky, olona 6% io ve dia mbo aiza.
Nandrahona ny prefen’Antananarivo fa dia ho henjana ny sazy…
Niaka-tsehatra ny jeneraly nantsoina SEG, malaza amin’ny satroka cowboy na kofiboay.
Niseho koa ny jeneraly hafa.
Fampitahorana avy etsy sy avy eroa. Niseho koa ny ATT ny asabotsy maraina fa izay mpitatitra tratra eny dia hifafa ny kihony…
Tsy nihemotra ny olona. Tsy nihemotra koa ireto nandrahona. Nosakanana ny teny andalana. Nogiazana ny fiara. Nasaina nivoaka ny fiara ny olona. Izay voa… mandeha antongotra dia nandeha antongotra tokoa ireo tratra teny analana tsy zazabodo tsy vaviantitra fa samy nivikiviky namonjy an’i Imerinkasinina.
Izay tokoa vao nisy fitsangatsanganana nilana fangatahana alalana. Nilamina anefa na ny teny andalana na ny teny ankianja… Fa inona ary ilay tena natahorana ?
Tsy fantatra e.
Ny ampitso indray kosa dia an’ny mpitondra ny sehatra. Nangorom-potsy Antaninarenina. Tsy nanao filazana goavana fa efa samy nahalala fia hiakatra eny Antaninarenina ny mpanohana ny hetsika 7 febroary. Ny loko fotsy no nosafidian’ny mpikarakara satria hono ry zareo madio fo sy madio saina.
Dia io fa samy naka selfie teny, namoaka sary ho hitan’ny mpanohana fa teny ary natao ampitsikiana izany fakana sary izany ka hadino ilay iray minitra fahanginana sa tsy nasiana tsiky.
Valin-kafatra ary dia voatonona tokoa ny anaran’Ingahy Ravalomanana. Tsapa amin’ny fihetsika sy amin’ny voambolana nampiasaina teny fa mbola mavaivay ny ratra. Tsapa fa tena tsy te hahalala izay fitoniana sy fampihavanana izany izao.
Dia eo izany isika aloha
Ny mena valala, ny fotsy te hahalala…Koa sao mba loko hafa aza no tokony hitondra ity Firenena ity sy ny vahoaka ao aminy e ?
27 novembre 2021 : Œuvrer ensemble pour protéger la vie marine depuis Antananarivo - il y a 3 jours
Orange et éducation : 30 nouvelles Ecoles Numériques pour l’année scolaire 2021-2022 - il y a 4 jours
Chronique de Razaf : Il y a plus urgent - il y a 5 mois
Matoan-dahatsoratra : Misafotofoto sy mifamahofaho ! - il y a 7 mois